दासढुङ्गा दुर्घटनाभन्दा रहस्यमय बन्यो अमर लामाको हत्या, दोषी को ? « रिपोर्टर्स नेपाल
दासढुङ्गा दुर्घटनाभन्दा रहस्यमय बन्यो अमर लामाको हत्या, दोषी को ?
प्रकाशित मिति : 2021 May 17, 9:56 am
काठमाडौं, ३ जेठ । आज २८औं मदन-आश्रित स्मृति दिवस । आजकै दिन चितवनको दासढुङ्गामा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएको दिन । आज नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले भण्डारी र आश्रितलाई अरुदिनभन्दा धेरै सम्झिए । नेताहरुले श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गरे । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सम्झदै गर्दा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने अमर लामालाई पनि सम्झिए ।
नेपालले श्रद्धाञ्जली दिदा दुर्घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन आग्रह समेत गरे । उनले घटनासँग सम्बन्धित अमर लामाको हत्याले झन् रहस्यमय बनाएको उल्लेख गरेका छन् । अमर लामा मदन भण्डारीका चालक थिए । उनी एमाले कार्यकर्ता पनि थिए । दुर्घटनामा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएपनि अमर लामा बाँचेका थिए ।
अमर लामामाथि दुर्घटना गराएको आरोप पनि लाग्यो । तत्कालिन एमालेले कारबाही पनि गर्यो । लामा जेल गए । पछि रिहा भएपछि मिडिया क्षेत्रमा पनि लागे । उनको हत्या भयो । त्यो पनि पत्रपत्रिकाकै कार्यालयबाट अपहरण गरी भएको थियो ।
आजभन्दा २७ वर्ष अघि २०५० जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमयी जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो । उनको मृत्युलाई तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले हत्याकाण्ड भने । यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति छिन् । मदनको बहुदलीय जनवादको विरासत थामेको दाबी गर्दै आएका केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, अझैपनि यो घटनाको रहस्य खुलेको छैन ।
मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीपका चालक अमर लामा घटनामा बाँच्न सफल भएका थिए । उनलाई जेल पनि हालियो । तर, घटनाको रहस्य खुल्न सकेन । घटनाका एकमात्र साक्षी अमर लामा पनि मारिए । उनको हत्या रहस्यम भयो । हत्यामा संलग्नहरु पक्राउ पर्नु त कता हो कता पहिचान समेत हुन सकेन । यसले झनै घटनालाई रहस्यमय बनायो ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमयी निधन भएको दासढुङ्गा दुर्घटनाकाण्डका एक मात्र साक्षी थिए अमर लामा । उनलाई पनि अन्ततः मारियो । दासढुङ्गा घटनाको दश वर्षपछि २०६० साउन १२ गते राजधानीमा लामाको हत्या भएको थियो ।
‘अमर दाइ ! नमस्ते’ भन्दै तीन जना अपरिचित युवकहरू ताजा खबर साप्ताहिकको कार्यालयभित्र पसेका थिए । कार्यलयमा सो पत्रिकाका सम्पादक फणिन्द्र दाहाल, अतिथि सम्पादक ईश्वरी वाग्ले र संवाददाता ज्ञानप्रसाद पौडेल भोलिपल्ट (सोमबार) निस्किने अखबारको तयारीमा व्यस्त थिए । पाँच मिनेटअघि मात्र ‘जनआवाज’ नामक आफ्नो स्तम्भका लागि लेख लिएर आइपुगेका प्रबन्ध सम्पादक अमर लामालाई अप्रत्यासित रूपमा आइपुगेका ती अपरिचितहरूले ‘दाई’ भनेर सम्बोधन गर्दै ‘नमस्ते’ भनी अँगालो हालेर कार्यालयबाहिर निकाले ।
‘तपाईहरूलाई त मैले चिनिनँ नि !’ अमर लामाले प्रश्न गर्दा ‘हामी हेडक्वाटर्रबाट आएका हौँ, एउटा सानो काम छ, तपाईँ दश मिनेटमा फर्किहाल्नुहुन्छ भने ।’ र तल सडकमा पर्खिरहेको ट्याक्सीमा हालेर हुँइँकिए । विजय स्मारक हाइस्कुल, डिल्लीबजारको ठीक अगाडीबाट बा १ ज २५६० नम्बरको ट्याक्सी तुरून्तै कालिकास्थानतर्फ बेगिएपछि कार्यालयमा रहेका साथीहरू झसङ्ग झस्किए ।
लामाको अपहरण नै भएको हो भन्ने पक्का विश्वास लागेपछि सम्पादक फणीन्द्र दाहालले प्रहरी कन्ट्रोलकक्ष १०० मा तत्कालै टेलिफोन डायल गरे । ट्याक्सीको नम्बर टिप्न भ्याएका उनले कन्ट्रोल कक्षमा ताजा खबर साप्ताहिक कार्यालय डिल्लीबजार, कालिकास्थान हुँदै लाँदै गरेको जानकारी दिए तापनि सो कक्षका प्रहरीहरू अपहरण भएको ठाउँ कालिकास्थान वडा प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबारअन्र्तगत पर्ने भएकाले उतै फोन गर्न सुझाव दिएपछि सिंहदरबार वडा प्रहरीमा फोन गर्दा २० मिनेटसम्ममा पनि फोन नउठेपछि पत्रिकाका संवाददाता ज्ञानप्रसाद पौडेलले पुनः वडा प्रहरी कार्यालय, दरबारमार्गमा प्रयोग भएको ट्याक्सीको नम्बरसमेत टिपाएका थिए ।
घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार एकजना अधबैंसे मान्छे भाग्दै एउटा स्टोप पसलभित्र पस्यो । गुहार माग्दै भाग्दै गरेको उसलाई त्यहाँबाट निकालेर व्यस्त सडकमा लगी पेस्तोलद्वारा गोली हानी हत्या गरेर ती अज्ञात हत्याराहरू तत्कालै फरार भएका थिए । सडकमा ल्याई ती आक्रमणकारीहरूले ‘अमर लामा यही हो, यसलाई छाड्नु हँुदैन’ भनी गोली हानेका थिए ।
वि।सं। २०५० जेठ ३ गते नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख क्रमशः मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप सहस्यमय ढंगबाट दुर्घनाग्रस्त भएपश्चात् नेताद्वयको मृत्यु भएको थियो भने सो जीपका ड्राइभर अमर लामा जीवित रहेका थिए । मदन–आश्रितको हत्याको आरोप लागेका लामा चार वर्ष जेलजीवन बिताएर निस्केका थिए ।
आफू दासढुङ्गा जीप दुर्घटनामा निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै आएका लामालाई एमाले पार्टीले ‘षड्यन्त्रकारी गद्दार’ घोषणा गरी पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो । जेलबाट छुुटेको केही महिनापछि नै २०५५ सालमा नेपाली कांग्रसको चुनाव प्रचार–प्रसारमा संलग्न भएका थिए ।
लामा मारिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०६० साउन १३ गते सोमबार बिहानै अमर लामाको अपहरणमा प्रयोग गरिएको ट्याक्सी बा १ ज २५६० का चालक दाताराम अधिकारी ट्याक्सीसहित आफैं उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उपस्थित भएका थिए । आश्चर्य, यस्ता अपराधमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन प्रायः घटनापश्चात् गायव हुने गर्छन् तर लामाको अपहरणमा प्रयोग भएको ट्याक्सी प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न आफै आइपुग्यो । (ब्रदर्श बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक नेपालका चर्चित हत्याकाण्ड पुस्तकको सहयोगमा)
आज असार १९ गते आईतबार, यस्तो छ आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ असार १९ गते आईतबार इश्वी सन २०२२ जुलाई ३ तारीख